३ वर्षसम्म चम्किनेछन् यी ४ राशिको भाग्य ! कमेन्टमा “ॐ ” लेखि हेर्नुहोस कतै तपाईको राशी त् परेन – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /Intresting/३ वर्षसम्म चम्किनेछन् यी ४ राशिको भाग्य ! कमेन्टमा “ॐ ” लेखि हेर्नुहोस कतै तपाईको राशी त् परेन
हिजो मध्य रातबाट सुर्यले राशी परिवर्तन गरेको छ। सुर्यले राशी परिवर्तन गर्दा कुनै राशिलाई राम्रो फाइदा हुने गर्छ भने कुनै राशिलाई बेफाइदा हुने हुन्छ। कुनै राशिलाई लाभ हुँदा छोटो समय सम्म मात्रै लाभ हुने हुन्छ भने कुनै राशिलाई लामो समय सम्म पनि लाभ कायम रहने हुन्छ। आज हुने सुर्यको राशी परिवर्तनले विभिन्न चार राशीहरुलाई ३ वर्ष सम्म लाभ दिलाउने हुन्छ। यी ४ राशीहरु सिंह, कन्या, तुला र कुम्भ रहेका छन्। आजको रातको १२ बजे देखि ३ वर्ष सम्म यी ४ राशीहरुलाई राम्रो समय रहने ज्योतिष शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। जीवनमा भएका विभिन्न समस्या हाल भएर जान सक्ला। केहि समय देखि हल नभएको आर्थिक समस्या समेत हाल हुने अवस्था आउन सक्ने देखिन्छ। यी राशी हुने व्यक्तिहरुको नबनेको कार्य समेत फत्ते हुने देखिन्छ। स्वास्थ्यको मामिलामा पनि यी ४ राशी हुनेहरुको लागि सुर्यको राशी परिवर्तन शुभ हुनेवाला रहेको छ।
एमएमएस(MMS) काण्डले बर्बाद भयो यी नायिकाको करियर, अहिले भइन् बलिउडबाटै पलायन !
को संग विवाह गर्दै छिन् मलाइका ? भन्छिन् विवाह गर्न कुनै उमेरले छेक्कदैन् म उहालाई आफुलाई भन्दा पनि बढि माया गर्छु